Nepali Sex Stories: मेरो डगी from lukekosamj.blogspot.com
मेरो नाम सुजाता हो अहिले मेरो उमेर २ १ बर्षा हुन लाग्यो । म् अब मेरो जिन्दगी मा घटेको एउटा सत्य घटना भन्न जादैछु। म सानै देखिबाट इन्टरनेट को पारखी भएको ले सधैं नेट्मा केही न केही कुरामा ब्यस्त हुने गर्थे जब मेरो उमेर सानो थियो त मैले सबै समय राम्रा राम्रा अन्लाईन गेम खेल्न र डाउन्लोड गर्न मा नै समय बिताउने गर्थे।
अली ९-१० कक्षा मा पढ्न थाले पछी मैले साथीहरुको कुरा सुनेर पोर्न साईट हरु पनि हेर्न थाले। मेरो रातिको काम नै नेट मा पोर्न मुभी हेर्ने भएको थ्यो। यसरी समय बित्दै गर्दा मलाई पनि धेरै नै सेक्स गर्न मन लाग्न थालेको थ्यो। १० कक्षा मा पढदा त मलाई धेरै नै गर्हो भएको थियो। तर कुरामैले मेरो केटा साथीहरु सँग भने केही भन्न सकेको थियन। म सँग मिल्ने धेरै केटा साथीहर भये पनि यो बिषयमा भने प्राय कसैलाई धेरै चाहना भयको मलाई लाग्दैन थ्यो। हाम्रो स्कुल एउटा धेरै नाम चलेको स्कुल भएको ले पढाई पनि धेरै कडा हुन्थ्यो तेसैले हामीले पनि धेरै नै मिहेनेत का साथ् पढ्नु पर्थ्यो,, । बातावरण नै तेस्ताइ भये पछी त केटा साथीहरु लाई त झन पढाई बारेमा अरु केही सोच्ने समेटा पनि फुर्सद हुँदैन थ्यो।
तेसै कारण ले मेरो सेक्स गर्ने इच्छा ले कुनै अबसर पाएको थियन।
तेस्ताइ कोही साथीहरु मिले पनि कहाँ गएर यो सबै काम गर्ने अनी कसैलाई थाहा भयो भने के गर्ने, बाबा आमा ले थाहा पाये भने के गर्ने जस्ता कुरा हरुले मलाई धरेऐ नै सताउथ्यो। तेसैले म भित्र भित्र गुम्सिरेहेकी थिए।
यता घर मा भने म सधैं नै ब्लु फिल्म डाउन्लोड गरेर हेर्ने गर्थे। पछी पछी त मलाई धेरै नै खपी नसक्नु भये पछी त मैले आफ्नै हातले खेलायर आफ्नो प्यास मेटाउन थालेको थिए। यसरी आफ्नै औंला घुसरेर ब्लु फिल्मा हेरेर मज लिना मलाई धेरै नै आनन्द आउन थ्ल्यो अनी मेरो प्यास पनि अली अली ब्घेको जस्ताइ हुन थ्ल्यो।,
हुँदा हुँदै मेरो एस् ल् सि को परिक्षा पनि सकियर म सधैं घरअंा नै बशन थालेकी थिय। तेशैले मलाई अब दिन रात नै नेट मा ब्लु फिलमा हेर्ने समय मिलन थालिएको थियो। यसरी छनी छानी नेट मा मुभिहरु हेर्दा हेर्दा मैले अब यनिमल पोर्न पनि हेर्न थालेको थिए। मलाई बिशेष गरेर कुकुर सँग को सेक्स धेरै नै मजा लागेको थ्यो तेसैले कुकुर को पोर्न मुभी ह्रु धेरै नै हेर्न थाले।
एसरी सबै यनिमल मुभी हेर्दा हेर्दा मलाई पनि कुकुर सँग नै सेक्स गर्ने कुरा को बारेमा धेरै नै सोच्न थाले। एशो बिचार गर्दा कुकुर सँग को सेक्स धेरै नै सुरक्षित भर पर्दो र कतै कसै लाई थाहा नहुने कुरा ले गर्दा म लाई यो कुरा धेरै नै ठीक जस्तो लग्न थालयो
आफु कतै यक्लाई पनि जन नपाउने, अरु मान्छे पनि घर मा लेरौन नपौने हाम्रो घर को नियम मा यो जस्तो राम्रो उपाय मैले केही देखेको थियन। तेसैले मैले मेरो घर म भएको हाम्रो कुकुर सँग धेरै नै संपर्क बढाउन थालेको थिए। अब मेरो काम तेही डगी सँग बसेर खेल्ने अनी डगी लाई नुहाउने हुन थालयो। मैले डगी लाई साँढेऐ नुहाएर सफा गरी खाना खुवाउने तथा बेलुका एशो बहिर घुमाउने गर्ना ले २-४ दिन म नैडगी मेरो साथी भएको थियो। तेसै ले बेलुक बेलुका म सँग नै रुमा म चली रहन्थ्यो तर सुत्न भने उस्को छुटै सानो बेड म स्टोर रुमा मा सुत्ने गर्थो जस्को ढोका जहिले पनि खुला नै हुन्थ्यो तेसैले रती पनि डगी रुमा बाट बाहिर बारान्दा मा निक्लेर करै रहन्थ्यो।
यसरी दिन हरु बित्दै गर्दा मैले डगी सँग सेक्स गर्ने पक्का निधो गरी यक दिन डगी लाई पनि मेरै रुम मा लगे। हामी बेलुका अबेर शम्मा खेलेर अब सुत्ने भयोउ तर मलाई भने डगी सँग आज मजाले सेक्स गर्ने इक्षा बध्दै जन थालेको थियो
। तेसैले मैले अब मेरो कपडा हरु खोलन थाले यसरी मैले मेरो पेन्टी पनि खोले पछी डगिले मेरो सबै अङग हरु सुघ्न थालयो। मैले बिस्तारै मैले मेरो योनी मा हात लगाउन थाले त्यस्तै डगिले पनि मेरो योनी चत्न थ्ल्दै थियो। जब मेरो योनी बाट पनि बाध्न थालयो त्यो पनि चतेर त मेरो डगी धेरै नैउफ्रेर मेरो चराइ तिर घुम्न थालयो। यसरी डगी ले मेरो योनी चत्न थाले पछी त मलाई पनि धरै नै मजा आउन थालयो। डगी मेरो अगाडि नै बशेर मेरो योनी चाट्न थाले पछी मैले पनि डगिको शरीर लाई सुमसुम्याउन थाले। डगी भने उस्को जिब्रो नै मेरो योनी भित्र पसौला जस्तो गरी चाट्दै थियो भने मेरो पनि डगी को टाउको अनी शरीर मुसार्ने काम बधदै थियो।
अब मलाई पनि डगी लाई एशो म तिर शरीर तानेर मुशर्ने क्रमा टाउको बाट पछाडि तिर अनी माथि बाट तल तिर बडाउन थाले। यता डगिको जिब्रो ले मेरो योनी चाट्दा म जिन्दगी को पहिलो चराम उत्कर्श मा पुग्न लगेको थिए भने उता मेरो हात हरु पनि डगी लाई मुशार्ने क्रम मा तेज हुँदै थियो। एतिकै मा मैले मेरो हत डगिको लिङग तिर लगेर जब मैले च्याप्प के मात्रै उस्को लिङग समतेको थिय डगिले आफ्नो पुरा शरीर नै अगाडि पछाडि गर्दै आफ्नो लिङग दर्हो बनएर मेरो हात मा नै सेक्स गर्न थालयो। अनी मैले निहुरेर हेर्दा दगिले पनि धेरै नै चिप चिप लाग्ने पानी आफ्नो लिङ बाट निकली सकेको थियो। एस्तो किसिम को उत्तेजना देखेर मैले डगी को लिङ छोडिदिये तर दगिले भने लिपिस्टिक जस्तो गरेर थोरै लिङ को भाग बाहिर निकालेर नेरो अगाडि पछाडि घुमन थालयो। मलाई पनि त्यो डगिको सार्हो लिङ अनी तातो बिर्य परेको हात ले गर्दा रन्का नै छुटेको थियो भने डगी त अब मेरो योनी चट्दै मेरो वर पर घुम्दै मेरो पछाडि बाट म माथि नै चाडन थालेको थियो।
अब हामी दुबइ जना सेक्स गर्न तयार भएका थियौ तर पनि मलाई कता कता डर लाहिरहेको थियो किनकी कुकुर हरु कुकुर सँग सेक्स गरदा यक अर्का सँग जोल्ठियर बशेको देखेको थिए कतै मेरो योनी मा पनि रात भरी अड्कियो भने के गर्ने होला भन्ने जस्ता कुरा ले सतौन थालयो तर ब्लु फिल्म म मान्छे सँग कुकुर ले सेक्स गर्दा भने त्यस्तो नभएको ले मैले मन मन नै हिम्मत गरेको थिए
तेशैले मैले फेरी डगिको लिङ लाई च्याप्प समातेर अगाडि पछाडि गराइ दिये एशो गर्दा डगिको लिङग उस्को छला भित्र नै धेरै सर्हो हुन थालयो अनी लिङ को फेद तिरको भाग केही मोटो हुन थालयो। त्यो साइज देखेर मैले अन्दजा लागाय कि डगिको लिङ पुरै सुपारी को डल्लो समेटा नै छिराय पनि धेरै दुख्दैन भनेर। किनकी मेरो कुकुर पनि मिडियम साइजको थियो तेसैले उस्को लिङ र तेस्को नट पनि मिडियम साइजको थियो। मैले पनि आफ्नो योउनी मा हस्त मैथुन गर्ने हुनाले कुकुर्को लिङ सजिलै लिना सक्ने अन्दजा लगये र आज मैले कुकुर ले जस्ताइ सेक्स गर्ने निधो गरे अनी कुकुर्को पुरा लिङ अनी लक नट पनि पुरै लिने बिचार ले म डगिको अगाडि घुडा टेकेर निहुरी परे। बस डगिले पनि यस्तै खोज्दै थियो जब म के घुड मात्र के टेकेको थिय यू त मेरो माथि चाडयो।
अब डगी मेरो माथि थियो अगाडिको दुई खुट्टा ले मेरो पेट तिर समतेको जस्तो थियो भने पछाडिको खुट्टा भुइमा टेकेको थियो। अब डगी ले पछाडि बाट आफ्नो लिङ मेरो जिउ तिर दल्न थालयो। उस्को लिङ कहिले ढाड मा कहिले पछ्दी चाक मा त कहिले मेरो योनिको छेउ छाउ मा दल्दै थियो यो क्रम मा उस्ले धेरै नै तातो ततो बिर्य पनि निकाल्दै थियो। ३-४ मिनेट को उफ्राई पछी डगी तल झर्यो यस्पाली डगिले योनी फेला नपरेको ले अली निरश जस्तो थियो भने यू मेरो योनी को छेउ मा लगेको बिर्य चटेर फेरी तुरुन्त उत्तेजित हुँदै मेरो माथि पुन चाडह्यो। यस्पाली भने डगिले लिङ सिधै मेरो योनी मा लगएर धक्का लगाउन थालयो थोरै थोरै गर्दै लिङ पसे जस्तो अनुभब भाई राखेको थियो यसै बेला मा डगी को भने धेरै स्पी ड् बद्दै थियो।
तातो तातो बिर्यको पिच्कारी सँगइ १०० को स्पी ड मा डगिले मेरो योनी भित्र आफ्नो लिङग अगाडि पछाडि गर्दै थियो यसरी ३-४ मिनेट सेक्स गरे पछी डगिले यक जोरदार धक्का लागायो यसपटक भने मलाई पनि धेरै दर्द भयो भने डगी ले भने अगाडि पछाडि गर्न छोड्यो। अब उस्को लिङग मेरो योनी भित्र मोटो हुँदै गाई रहेको अनुभब हुन थालयो। जसरी डगिको लिङग मोटो हुँदै थियो त्यसरी नै भित्र भित्र बिर्यको धारोले हनेको जस्तो अनुभुती हुँदै थियो। अब डगी भने खाली मेरो कमर पक्डेर मेरो माथि नै चाडहिरहेको थियो यता मलाई भने डगी को पुरा लिङग को तातो तातो मजाले मस्त बनै राखेको थियो। यसरी पहिलो पल्ट मा नै म ५ पटक जती स्खलित भये होला त्यसमा पनि मेरो भित्र डगिको बिर्यको पिच्कारीले त अतिनै आनन्द दिएको थियो। यसरी कारीब १५ मिनेट पछी डगिको लिङ बाट १ जोरदार झट्का शाहीत बिर्य निक्ल्यो नै दगिको लिङ पनि मेरो योनी बाट बाहिर निक्ल्यो। जब उस्को लिङग के बाहिर निक्लेको थियो तब त मेरो योनी बाट पनि डगिको बिर्यको धारा नै निक्ल्यो। तर दगिले मेरो योनी उस्को बिर्य अनी उस्को लिङ सबै चाटेर सफ बनायो
त्यो दिन हामीले १ पटक मात्र सेक्स गरेर सुत्योउ। अब बाँकी दिन मा भने दिन मा ३ पटक शम्मा पनि सेक्स गर्‍योउ। तेसै क्रम मा हामीले पनि सेक्स स्टाइल चेन्ज गर्न थालयोउ। आज कल त म मेरो डगी लाई पहिला चुसेर नै उस्को लिङग बाहिर लेराउछु अनी उस्को ठुलो लिङग समतेर आँफैले सेक्स गर्दको मज त झन छुत्तै हुने रहेछ। यसरी सेक्स गर्दा आफुले न्चहे जती डगिको लिङग आफ्नो योनिमा छिरौन पनि पाइने अनी आफु लाई नपुगुन्जेल सम्माआँफैले सेक्स गर्न पनि पाइने। अब मैले नेट मा नयाँ स्टाइल पनि हेर्दाइ छु त्यो सबै म तपाईं हरु लाई अर्को कथामा लेखौला। यदी तपाईं हरु लाई पनि डग सेक्सको बारेमा जानकारी लिना चाहनु हुन्छ भने प्लिज कमेन्ट मा आफ्नो प्रश्न गर्नु होला।
आठऐ ट्रेनिङ प्राप्त सेक्स डगी हरु चहियको भये पनि आफ्नो ईमेल लेख्नु होला
Posted by sexjob at 8:53 AM
wass up ! ur story made my dick rock hard . i would be greatful if ugive me achance !!? ill be ur doggy for my entire life :-P
Anonymous March 30, 2014 at 4:23 AM
lado chusaune man ho
24SexMovie January 28, 2015 at 7:57 PM